Qarax ka dhacay Afgooye iyo khasaaro ka dhashay - Awdinle Online
Qarax ka dhacay Afgooye iyo khasaaro ka dhashay
Faah faahino ayaa kasoo baxaya Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo daqiiqado kahor ka dhacay Suuq ku yaalla gudaha Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa uu ka dhacay Suuqa xoolaha lagu iibiyo ee Afgooye, xili halkaas ay dad farabadan ku sugnaayeen, waxaana jugta qaraxa laga maqlay inta badan xaafadaha degmada.
Goobjoogayaal ayaa qaxaa ay sheegeen in qaraxaas uu ku geeriyooday qof shacab ah, halka laba kalena dhaawac uu soo gaaray, kuwaasi oo la geeyay xarun Caafimaad.
Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa tegay goobta uu qaraxu ka dhacay, iyagoo halkaas ka wada howlgal baaritaano ah, sidoo kalena xiray suuqa.
Maalinta arbacada ayaa waxaa la isugu tagaan Suuqa xoolaha Degmada Afgooye, waxaana halkaas isugu tega dadka xoolaha ka ganacsada iyo dadka iibsada, iyadoo xiliga uu qaraxu dhacayay ay halkaas ku sugnaayeen dad shacab ah.
Previous articleAkhriso: Goormee ayaa Baarlamaanka la horgeynayaa heshiiskii doorashada
Next articleKulanka Golaha Shacabka oo furmay & Khudbadda MD Farmaajo oo bilaabatay